ရေးဆရာတော်များ မှာ အီမေလ်သို့ ပေးပို့လာခြင်းကို ဖော်ပြသည်။
၂၀၀၇ စက်တင်ဘာ ၁၈ ရက်နေ့ကစ၍ မကြောက်မရွံ့ရှေ့ဆုးံကနေဦးဆောင်၍နိုင်ငံတာဝန်ပြည်သူ့ဆန္ဒတွေကိုယ်မရရအောင်အားလုးံကိုယ်စွန့်လွှတ်အသက်ပါပေး
များထံသို့မည်သူတဦးတယောက်မျှလာရောက်၍ကူညီပေးခြင်းမရှိပါသို့ ဖြစ်ပါ၍ မိုးမခသတင်း နားကြား သတင်း
နိုင်ငံတကာရောက်ရွှေမြန်မာမိသားစုများခင်များ ဦးဇင်းတို့ကိုယ် ယနေ့အချိန်ထိ ပြည်ပရောက် နိုင်ငံတာဝန်ကိုယ်
လုးံဝဘာတခုမှ မကူးပါကြောင်း ထပ်ခါထပ်ခါအသိပေးလိုက်ပါတယ်။
နိုင်ငံတကာ လှည့်လည်၍ တိုင်းပြည်အတွက်ဆိုပြီး ပတ်တောင်းနေကြသောသူများမှလည်းယနေ့အချိန်ထိ ဘာတ
ကြတဲ့ လူ ဘုန်းကြီးများကိုယ်လည်းအသိပေးလိုက်ပါတယ်။
? ဘာနိုင်ငံရေးလုပ်လို့လည်း မွှေးကတဲကတောင်းဘို့ရာသင်ထားတာ နိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုရင် လောလောလတ်လတ် ၂၀၀၇ ပွဲတုးံကဘာဖြစ်လို့မတွေ့တာလည်း အခုမှ ဟိုနားကပါသလေးဒီနားကပါသလေးနဲ့ ပြောပြောနေကြတာမရှက်ဘူးလား?
ဘဲလုပ်နေကြတာ ပြောလိုက်တော့ နိုင်ငံကြီးအတွက် ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေအတွက် ဗမာလူမျိုးတွေ ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုပြီပတ်တောင်းနေတာ ရွှေဝါရောင်တို့ရဲ့ ပညတ်ချက်ထဲမယ် ငွေတောင်းတာမပါဘူးကွ
လေးဘာလေးနဲ့ပြောပြောပြီးတောင်းနေသေးတယ် တကယ်လုပ်မယ်ဆိုရင် အချိန်တန်ပြီးဆိုတာမင်းတို့မသိဘူးလား ?
နုတ်အားဖြစ်လည်းကောင်းပတ်ပြောနေတာ အဲဒါငါတို့မကြိုက်ပါဘူး။ ရှင်းတမ်းထုတ်ပေးပါ လို့နိုင်ငံတကာရောက် ဘုန်းကြီးများနှင့်တကွ ဒကာဒကာမများအားအသိပေးအကြောင်းကြားလိုက်ပါတယ်။